Debian GNU / Linux 9.8 yakaburitswa neakawanda ekuchengetedza ekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Debian Project ndeye hombe uye yekare chirongwa icho chisingazorore kutaridzika sediki mazuva ese, uye isu tese tinoshandisa zvakananga kana zvisina kunangana distros zvinoenderana neprojekti iyi, tinofanirwa kutenda nharaunda yekuvandudza nekufambira mberi uku. Iye zvino vhezheni nyowani yeStretch yaburitswa, Debian GNU / Linux 9.8, yekutanga yechisere yekuvandudza inouya mushure mekuburitswa kwe9.7 kuvhara mamwe maburi ekuchengetedza
Kana iwe uchirangarira, isu takatotaura nezvekukosha kwekushushikana kwakawanikwa muAPT, uye chigamba chayo chakaburitswa. Zvakanaka, ikozvino neDebian 9.8 isu tichava takachengeteka zvakanyanya kupfuura zvataive pakutanga, nekuti inosanganisira anenge zana zana ekugadzirisa ane chekuita ne Seguridad. Ndiko kuvandudzwa kukuru mune izvi, asi handicho chete chinhu, zvimwe zvinhu zvakakosha izvo zvaive zvisirizvo mukuburitswa kwakapfuura zvakagadziridzwa zvakare.
Zvino, kana iwe ukagadzirisa yako Debian distro kune iyi nyowani vhezheni, iwe unogona kutarisira kune iyo hombe iyo hombe huwandu hwekuvandudza chete nekuita yakapusa kuraira mune iyo shell. Kana iwe usati uine izvozvi, iwe unotoziva zvaunogona kuwana mufananidzo weIO kuiisa kubva webhusaiti yepamutemo yeprojekti. Ikoko iwe unowana zvimwe zvakawanda nezve chirongwa ichi mune zvese, uyezve neshanduro yeiyi nyowani vhezheni, pamwe neakasiyana zviwanikwa. Iwe unoziva, kugadzirisa:
Kudzokera kuDebian GNU / Linux 9.8 kugadzirisa, isu takaona iwo makumi mapfumbamwe ekuvandudza ayo anowedzera akakosha mabug fixes kune akati wandei akakosha mapakeji anouya akafanogadzirwa neiyo distro, zvakare iwo makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe anovandudza anovhara ekuchengetedza maburi kana kushupika, izvo zvinowedzera kusvika kune a yakazara kubva 186 kuvandudzwa. Iri risingafungidzike huwandu hwebasa. Saizvozvo, makumi maviri nematatu mapakeji ekudzikiswa akabviswa, ayo anokosheswa nekuachengeta akachena uye nekukurumidza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian GNU / Linux 9.8 yakaburitswa neakawanda ekuchengetedza ekuvandudza
Linspire Cloud Edition 8.0 iri pano nezvitsva ...